Buuxinta cad | November 2019
Iyada oo dhadhan fiican, yaanyada waxay sidoo kale leeyihiin bogsiinta guryaha. Waxay caawiyaan dadka buka ee qaba hypertensive oo qaba cadaadis dhiig oo sarreeya, fitamiin B si ay u soo celiyaan nidaamka dareenka. Sidoo kale, yaanyada ayaa hodan ku ah birta, zinc, potassium, magnesium, dhammaan walxaha muhiimka u ah shaqaynta caafimaadka caadiga ah ee jirka bini'aadamka.
Noocyada yaanyada ee dhulka furan
Haddii baradho badan la yiraahdo rootiga labaad ee Ruushka, ka dibna midka saddexaad, midig, waxaa loo yaqannaa yaanyo. Way adagtahay in maanta la kulmo marti-joogta, oo aan xusuusan karin dhowr ka mid ah cuntooyinkeeda ma aha oo kaliya cayayaanka, laakiin sidoo kale sii kordhaya khudraddaas. Intaa waxaa dheer, ma jiro goob beerta ah oo laga saari karo kuwan dhadhan fiican leh, firfircooni, qorraxda qorraxda ee qoysaska habeenkii ah.